Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara China Manufacturer
Description:Gearbox Dielectric Coating,Dielectric,Fanamafisana ny dielectric
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an&#39;ny kodiarana > Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin&#39;ny fiara
TUWF-47 dia singa HFC tsy manam-paharoa manana lanjany ODP zero ary ambany ny vidin'ny GWP. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanadiovana, fanosotra sy ny fanamainana amin'ny fitaovana fiterin'ny dipoavatra.
Afaka manolo ny HCFC misy azy sy ny liquids FC amin'ny ankamaroan'ny fampiharana. Manana ny tsy fahalefahana, ny fiantohana ara-tsimia, ny fiantohana ara-pahasalamana ary ny toaka poakaty,
ary koa ny fahaverezan'ny fandotoana. Ireo toetra ara-batana tsy manam-paharoa ireo dia mahatonga ny TUWF-47 vokatra tsara ho an'ny fampiharana marobe.
Ny TUWF-47 dia manana vahaolana matanjaka kokoa noho ny CFC-113, fa azo ampiasaina ihany koa amin'ny alikaola, hydrocarbons ary esters mba hampiorenana azeotropes na fanangonana hanatsarana ny fahalotoana.
manana dielectric avo. Fanamafisana ny famokarana hafanana amin'ny fiara
Ny tsy fahampian'ny fahosana simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny hafanana hafanana hafanana.
Ny fluorocarbon dia misy tsiranoka mahomby ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny hafanana hafanana hafanana;
* Ny tebitin- tsiran-tsiran- tsolika ara-pahasalamana dia tena tsotra. Misy ny fiverimberenana eo am-panaovana asa, izay manalavitra ny hafanana amin'ny fiverimberenana, hany ka miantoka tsara sy miorina tsara ny fizotran'ny hafanana;
* Kofehy ho an'ny kodiarana tsy misy entin-javatra mampidi-doza, tsy levona ary tsy misy fipoahana, tsy misy afo sy teboka tselatra;
* Fluorocarbon Kodiakaly tsara fantsom-pamokarana herinaratra, fiakarana avo lozam-pifamoivoizana mihoatra ny 40KV;
* Fluorine Kofehy tsara vinaingitra, mangozohozo ambany noho ny rano madio; Afaka mikoriana tsara ary manaparitaka hafanana amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fakan-tsary;
* Solvent fluorinated nvontoxic, harmless, non-irritating;
* Fiompiana fluorôcarbonin'ny ranon-tsavarano mivelona amin'ny tontolo iainana, manana ODP lanjan'ny 0 sy ambany ambany GWP ambany
Product Categories : Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an'ny kodiarana
Tsy misy solon-drivotra solon'ny fluoridin'ny solosaina Contact Now
Toeram-piofanana goavam-be amin'ny rano fisotro madio Contact Now
Fitaovana Cooling Medium ho an'ny kodiarana Contact Now
Fiarovan'ny fluorocarbon an'ny gilasy Contact Now
Fiarandalamby fandroana fluorocarbon ho an'ny gearbox Contact Now
Fiarovana avo lenta amin'ny ranomandry Contact Now
Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara Contact Now
Gearbox Dielectric Coating Dielectric Fanamafisana ny dielectric